Aqoonsiga U-diidmada Kaamirooyinka Jidh-Qarxan ee Shaqaalaha | Xalka OMG
Kaameeraduhu waa inay horseedaan hoos u dhac ku yimaadda saraakiisha booliiska. Dadka dhaliila ayaa ka baqaya ka soo horjeedda. Dhibaatadu waa xakameyn hal-dhinac ah.
Kamiin-garabka oo saaran garabka booliiska
Miyay habboon tahay inay had iyo jeer socoto?
Kaamirooyinka jirku waa cilladdii ugu dambeysay ee booliiska. Hal dowlad-goboleed ka dib mid kale ayaa hadda abuureysa aasaaska sharciga ee loogu talagalay isticmaalka kaamirooyinka yar-yar ee garabka ama jeebka naaska saraakiisha booliiska. Ilaa hadda, bilaysku waxay si gaar ah u taageerayaan hal-abuurka. Haddii ay waliba faa'iidooyin ka keento aragtida sharciga madaniga ah waxay kuxirantahay galka.
Iyada oo loo marayo kamarad casri ah oo lagu dhejiyay garabka booliiska, habdhaqanka wakiillada waa lala socon doonaa.
Tallaabada ayaa ah, mid, in lagu xaqiijiyo in tallaabada saxda ah ee booliiska, sida ku xusan borotokoollada, iyo laba, looga fogaado falalka musuqmaasuq ee suuragalka ah, iyo lambarka saddexaad, ayaa sidoo kale si sax ah looga heystaa caddeyn marka ay ka dacwoodaan tallaabada booliiska.
Booliisku waxay rumeysan yihiin in duubista kontaroolada iskahorimaadka ay yareynayaan rabshadaha ka dhanka ah saraakiisha booliiska. Dadka dhaliila ayaa ka soo horjeedda. Ramaasleyda badanaa waa sakhraansan yihiin waxaana laga yaabaa inay si gaar ah uga xanaaqaan isticmaalka kaamirooyinka. Labaduba dhawaaqa waa laqadayaa. Sida muuqata, booliisku waxay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee soo tabiya haddii Kameradu dhab ahaantii yihiin kuwo waxtar leh oo khatar galinaya caafimaadka saraakiisha.
Dhibaatada labaad waa waxa loogu yeero pre-duubista. Markaa in firfircoonaanta kaamiradda iyo daqiiqaddii hore la helo - oo waxtar u leh fahamka xaaladda - kaamiraduhu waa inay had iyo goorba socdaan. Ilaaliyayaasha xogtu waxay u arkaan inay tahay xog hayn cusub. Ereyga ayaa u muuqda xoogaa aad u sarreeya. Haysashada xogta telefoonka, dhaqanka isgaarsiinta ee dadka oo dhan ugu yaraan lix asbuuc ayaa la duubay. Halkan, dhinaca kale, waxay ku saabsan tahay taxadarka taxaddarka ee sawirrada iyo dhawaqa 60 sekan oo keliya - waana tan xaalad aan bilaysku u dhaqmin si qarsoodi ah laakiin si furan.
Gaar ahaan dhibaatada waa xakameynta hal-dhinac ah ee Kamerada-jirka. Sababtoo ah waa sarkaalka booliiska kaliya ee go'aamiya goorta goobta si joogto ah loogu kaydiyo. Isaguna wuu damin karaa kaamirada waqti kasta. Qiimaynta duubista waxaa sameeya booliska. Sidaa darteed, welwelka waa iska cadahay in jirka oo keliya caddeymo ku saabsan muwaaddiniinta la diiwaangaliyo, laakiin ma aha khaladka saraakiisha booliisku. Jirka-camku markaa ujeedku maahan ujeedo, laakiin waa tilmaam loo adeegsan karo tixraac.
Baadhitaan ay sameysay Jaamacadda Cambridge ayaa ku yimid natiijooyin la yaab leh: markii booliisku ay rogi karaan oo dami karaan, isticmaalka xoogga booliisku wuxuu kordhay boqolkiiba 73. Marka la barbardhigo, haddii kaamiradu ku dhaqaaqdo xilliga wareegtada oo dhan, adeegsiga xoogga ayaa hoos u dhacay 36 boqolkiiba. Baxsashada dhabta ahi waxay umuuqataa inay suurtagal tahay oo keliya haddii jidhka 'cam-cam' uu diiwaan geliyo googoosyo gabi ahaanba. Tan waa in mar kale lagala hadlaa sarkaalka ilaalinta macluumaadka. Booliiskuna wuu muujin karaa markan hadii ay tahay waxwalba oo ku saabsan badbaadinta saraakiisha booliska ama wanaaga dhamaan dadka ku lugta leh.
"Teknolojiyadda ayaa la heli karaa sidaa darteed waaxyo badan oo booliis ah oo ka howlgala gobolka iyo waddankuba waxay yeelan doonaan kamaradaha jirka, oo ay ku soo bandhigaan muuqaal ka soo baxa saraakiishayaga, si ay u arkaan waxa ay isku dayayaan,"
Booliisku waa inay, ka hor adeegsadaan ama aruuriyaan diiwaanadan, ay go'aamiyaan goorta ay aruurinayaan, duruufaha ay sameyn doonaan, duruufaha loo oggol yahay inay qabtaan, maxay sameynayaan hadda, sidee iyo goorta iyo waxay ahaan doonaan burburay.
Adeegsiga kaamirooyinka jirka micnaheedu waa duubista tiro aad u badan oo ah maqal muuqaal ah oo ay kujiraan isdhexgalka shakhsiyaadka la aqoonsan karo. Is dhexgalkaas, magaca, isirka, qowmiyadda, midabka ama da'da shaqsiga waa la qori karaa. Rikoorradan, marka lagu daro tikniyoolajiyadda cusub ee falanqaynta fiidiyowga iyo aqoonsiga wajiga, waxay u oggolaaneysaa meel marinta sharciga inuu gaaro heer aan hore loo arag oo ku saabsan aqoonsashada shaqsiga. Macluumaad kasta oo ku saabsan "shaqsi la aqoonsan karo" waxaa loo qaddariyo macluumadka shaqsiyeed iyada oo macnaheedu yahay Sharciga Ilaalinta Macluumaadka Qofka iyo Sharciga Dukumiintiyada Elektiroonigga ah (PIPEDA).
Qeybta 7 ee PIPEDA waxay bixisaa in "macluumaadka shaqsiga aan la ururin karin iyadoon laga helin aqoon iyo ogolaanshaha shaqsiga", mooyee, waxyaabo kale, "aruurintu waa macquul macquulna ah oo ujeedooyin laxiriira baaritaanka ku xadgudubka heshiiska ama ku xadgudubka federaalka ama sharciga gobolka ". Si kastaba ha noqotee, wax cabsi ah oo shaqsiyaad ka tirsan saraakiisha booliisku qasab ma ahan in la baaro. Magaca ixtiraamka iyo qarsoodiga macluumaadkayaga shakhsiyeed, adeegsiga kaamirooyinka jirka ma aha, sidaas darteed, lagama badbaadin karo qaab dhismeedka sharciga. Adeegsiga xorta ah ee teknolojiyaddan ayaa wiiqi doonta macnaha fikirka qarsoodiga.
Khatarta ah in duulaanka qarsoodiga uusan halkaas ku joogsan. Mas'uuliyiinta kaliya maahee kayd u ​​ah qofka aad tahay laakiin sidoo kale waxa aad tiraahdo. Intaa waxaa dheer, ma jiraan wax ka hor istaagaya kaamirooyinka jirka in ay duubaan macluumaadka ku saabsan kuwa raacaya iyada oo aan la aqoon. Teknolojiyadani waa inay si habsami leh u soo gasho bulshadeena si aysan ugu xadgudbin asturnaanta.
Isla dareenka, waxaa xiiso leh in la ogaado in arrinta kaamirooyinka ay wajaheyso fikradaha gudaha laga wadaago. Marka laga soo tago walaacyada dhanka sharciga ah, qabashada kaamirooyinka jirka waxay matalaan maal gashi muhiim ah oo waqti iyo ilaha qeybaha ay quseyso.
Caqabadaha ayaa ah soo aruurinta hadalada marqaatiga iyo dhibanayaasha. Waxaan ogaanay in dadku ay ka cago jiidayaan inay u marag furaan marqaati ahaan sababtoo ah waxay ogyihiin inay cajalad muuqaal ah leeyihiin. Dadka qaar ayaa si adag u diida in la duubo. Kuwa kale waxay isku dayaan inay tirtiraan aragtida kaamirada. Kaamirooyinka waa in lagu shaqeysiiyaa gacan ahaan waa caqabad lafteeda. Loogu talagalay… saraakiisha aan waligood helin, waa inay bartaan sida ay u shaqeeyaan oo ay u xasuustaan ​​sida loo sameeyo xaalad kacsanaan badan. Baadhitaanku wuxuu muujinayaa in saraakiishu u baahan yihiin wax kabadan ama wax kayar sanad n markii ficilkii kamaradu u noqdo dabiici.
Aqoonsiga U-diidmada Kaamirooyinka Jir-Qarxan ee Shaqaalaha ahaa kii ugu dambeeyey: December 2nd, 2019 by admin
3183 Wadarta Views 26 Views Maanta